lost Admin Password (or) အက်မင်ပတ်၀က် ကိုမေ့သွားရင်- စာမျက်နှာ2- MYSTERY ZILLION
lost Admin Password (or) အက်မင်ပတ်၀က် ကိုမေ့သွားရင်
ပြောတော့ပြောချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ... ။
ဒီနေရာမှာ ကျနော်တို့ အက်ဒမင် ပတ်စ်၀ါဒ်ကိုဖျက်တယ်ဆိုတာက (ကျနော်တယောက်တည်းအနေနဲ့ဆို) စက်ပြင်တဲ့အခါမှာဖျက်တာပါ။ အချို့စက်ပိုင်ရှင်တွေက ဘာပေးခဲ့မှန်းမသိတော့တာတို့လိုမျိုးပေါ့လေ။
အဲဒီအခါမှာ ကျနော့်အနေနဲ့ ...
၁။ Safe Mode ကနေ၀င်ကြည့်ပါတယ်။ မရရင် ...
၂။ Guest, Limited A/C ရှိရင် AccMaker သုံးပါတယ်။ မရရင် ...
၃။ ERD Commander နဲ့ ၀င်းဒိုးစ်တက်ပြီး LockSmith ကနေ P/W ပြောင်းကြည့်ပါတယ်။ မရရင် ...
၄။ Herin's Boot CD နဲ့၀င်းဒိုးစ်တက်။ Active Password Changer သုံးပြီး SAM ဖိုင်ကတဆင့် ပတ်စ်၀ါဒ်ဖျက်ပါတယ်။
ဒီလောက်ဆို လုံလောက်တယ်ထင်ပါတယ်။ ကောင်းတာလုပ်ရင်တော့ ကောင်းတာတွေဖြစ်လာမှာပါလို့ဘဲ ...
ကျွန်တော်တော့ ERD နဲ့ အဆင်ပြေသွားပြီ။ သူက administrator account ကို သူ့နာမည်ပြောင်းတယ်သာ ပြောတာ။ သူ့နာမည်ကို administrator ဆိုပြီး ပြန်ပြောင်းတာကို မေ့နေတာ။ Boot CD တွေ ကိုင်ပြီး ချီတက်သွားတာ။ ဟိုရောက်တော့ LockSmith ကနေ P/W ပြောင်းမယ်လည်း ကြံရော သူ့နာမည်က မရှိတော့ဘဲ administrator ပဲ တွေ့တယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ ပြန်ပြီး boot လုပ်ပြီး account က administrator နဲ့ သူ့ password အဟောင်းနဲ့ ပြန်၀င်တာ ရသွားတယ်။ ၀ိုင်းပြီး ကူညီကြတာ ကျေးဇူးပါ။
Hiren's BootCD 9.1 ပါ
အရင် Version တွေလဲရှိပါသေးတယ်..
ဒီမှာ သွားရောက် ဒေါင်းလော့လုပ်ပါ..
File Size - 72.72 MB
download လုပ်ပြီး zip File ကိုဖြေလိုက်ရင်
အထဲမှာ Image File ပါပါတယ်
သူ့ကို Double Click ပေးပြီး CD တစ်ချပ်ထည့် Burn လိုက်ရုံပါပဲ
ကဲ CD/DVD ROM ပါရင် စမ်းကြည့်ပေတော့ဗျာ.. :103:
အကိုရေ download လုပ်ပြီး ကျွန်တော် win arr ဖိုင်ကို ဖြေချလိုက်တဲ့အခါမှာ
The achieve is either is unknown formeat of damaged လို့ error တက်လာတယ်
download Manger က orbit နဲ့လုပ်တာ
ကျွန်တော်က New User မို့ပါ
Orbit မသုံးပဲနဲ့ ဒေါင်းလုပ် အသစ် ပြန်လုပ်ကြည့်ပါလား။
winrar ရော version ဘယ်လောက်သုံးလဲဗျ။ ကျွန်တော်ကတော့ 3.7 လား မသိဘူး။
MZ download centre မှာ rar repair tool ရှိတယ်လေ။
အကိုရေ ကျွန်တော် orbit မခံဘဲ လုပ်တာ မရဘူးဗျ ဖြစ်နိုင်ရင် ကျွန်တော့ Mail ထဲပို့ပေးစေချင်ပါတယ် ကျွန်တော့ Mail က [email protected] ပါ ပြီးတော့ rapidshare .com ကို ဘယ်လို download လုပ်ရမလဲ orbit နဲ့ copy paste လုပ်တာ မရဖြစ်နေတယ် ဆွဲတော့ဆွဲတယ် တစ်ဖိုင်ကို 8kb လောက်ဘဲ ပါတယ် ကျေးဇူးပြုပြီး ရှင်းပြပေးပါအုံး အားလုံးကို ခင်မင်ပါတယ်
ဒီ ဟက် တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော် နည်းနည်းလောက် အားမနာတမ်း သဘောထား ကွဲလွဲပါရစေ။ ဘာမှ မပြောရသေးပေမယ့် အကယ်၍ ကျွန်တော် ပြောတဲ့အထဲမှာ မကျေနပ်စရာ စိတ်ဆိုးစရာ ဒါတော့ ဖြင့်ဟိုလူ့ကို ပြောတာ ဒါတော့ ဒီလူ့ကိုပြောတာ စသည်ဖြင့် ထင်စရာများရှိလာခဲ့ရင် ဒါဟာ မြန်မာရဲ့ အိုင်တီ လောကကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စေချင်သော ကဘာ ကို အမှီလိုက်နိုင်စေချင်သော စိတ်ဖြင့်သာ ပြောခြင်းဖြစ်ပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှ မရည်ရွယ် ပါကြောင်း ကြိုတင်ပြောထားပါရစေ။
လူတွေက ပြောကြတယ်။ ဟက်တာ မကောင်းဘူး။ လူ့ကျင့်ဝတ်နဲ့ မညီဘူး။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ဂျန်းတဲမန်း မဆန်ဘူးပေါ့ဗျာ။ ဒါကြောင့် သူများကို မဟက်ချင်ပါနဲ့။ အကယ်၍ သူများ က ကိုယ့်ကို လာဟက်ရင် ဘယ်လိုခံစားရမလဲ ဆိုတာ ကိုယ်ချင်းစာကြည့်ပါတဲ့။ ဟုတ်တယ်။ ကျွန်တော် တစ်ဝက် ထောက်ခံတယ်။ကျန်တဲ့ တစ်ဝက်ကိုတော့ လုံးဝကို ကန့်ကွက်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ စကားလုံး နည်းနည်း ကျန်နေလို့ပါ။ အမှန်တစ်ကယ် ဖြစ်သင့်တာက သူတစ်ပါး ပျက်စီးရာ ပျက်စီးကြောင်း ဖြစ်အောင် မဟက်ပါနဲ့ လို့ပြောရမှာပါ။ ဟက်တိုင်း ကောင်းတာမဟုတ်ပေမယ့် ကောင်းအောင် ဟက်လိုက်ရတာလည်း ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ ဟက်ကာတိုင်း လူဆိုးတွေ မဟုတ်ကြပါဘူး။ ဆိုးတဲ့ ဟက်ကာရှိသလို ကောင်းတဲ့ဟက်ကာတွေလည်း ဒုနဲ့ဒေးပါ။ အဖြူရောင် ဟက်ကာ နဲ့ အမည်း ရောင် ဟက်ကာ ပေါ့ဗျာ။ နိုင်ငံခြားက ကုမ်ပဏီ တွေမှာ အမည်းရောင် ဟက်ကာတွေရဲ့ ရန်က ကာကွယ်ရန် အဖြူရောင် ဟက်ကာ တွေကို လခတွေပေးပြီး ခန့်ထားရတယ်လို့ မှတ်ဖူးပါတယ်။ အမည်းရောင် ဟက်ကာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဖြူဟက်ကာပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူတို့လျှောက်လာတဲ့လမ်းက တစ်လမ်းတည်းပါ။ ဟိုဟာကို ဟက်ကြည့်လိုက် ဒီဟာကို ဟက်ကြည့်လိုက် ဟိုလူဟက်ထားတာကို ဖတ်ကြည့်လိုက် ဒီလူဟက်ထားတာကို လေ့လာလိုက်နဲ့ပဲ ဖြစ်လာကြတာပါ။ ဆိုလိုတာက သူဘာလုပ်နေလဲ ဆိုတာထက် ဘာအတွက် လုပ်နေလဲ ဆိုတာ ပိုအရေးပါပါတယ် လို့ ပြောချင်တာပါ။ ကျွန်တော့် အယူအဆ ကတော့ ကြိုက်တဲ့လူ ကြိုက်သလိုပြောပါစေ ကိုယ်လျှောက်တဲ့လမ်းက မှန်တယ်လို့ထင်ရင် ဘယ်သူ့မှ ဂရူမစိုက် ပါဘူး။ စိတ်ဆိုးစရာ လည်းမရှိပါဘူး။ တစ်မေတည်း မွေးတဲ့ ညီအစ်ကိုချင်းတောင် အတွေးအခေါ်ချင်း အယူအဆချင်း တူတာမှမဟုတ်တာ။ သူတို့မှာလည်း သူတို့ အယူအဆနဲ့ သူတို့ ထင် ပိုင် ပြောပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရာတိုင်းမှာ အကောင်းနဲ့ အဆိုး အမြဲဒွန်တွဲနေကြပါတယ်။ ကောင်းတာ ဖြစ်ဖို့အတွက် ဆိုးတာတွေ ရင်းလိုက်ရသလို ဆိုးတာဖြစ်ဖို့အတွက် ကောင်းတာတွေလည်း ရင်း လိုက်ရတာ ဓမတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ နယ်ချဲ့ လက်အောက်က လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် လူပေါင်းများစွာရဲ့ အသက်ကိုရင်း ခဲ့ရတာပါ။ စစ်တိုက်တာ မကောင်းဘူး လို့ပြောရင် လူတိုင်းလက်ခံကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကတ််စမှာတော့ မကောင်းဘူးလို့ ပြောမယ့်သူ ရှိမယ်မထင်ပါ။
ဒီဖိုရမ်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က အိုင်တီမှာ မြန်မာတွေ ခေတ်နောက်မကျစေရန် လို့ထင်ပါတယ်။ ဟက်တတ်မှ ခေတ်မှီတယ်လို့ မဆိုလိုပါ။ ဥပမာပြောရရင် ကနောင်မင်းသား လက်နက်စမ်းတာကို သတ်တဝါ တွေသေရတယ်ဆိုပြီး မင်းတုန်းမင်းကြီး တားခဲ့သလိုပေါ့ဗျာ။ ဘာလုပ်တာလဲ ဆိုတာကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ ဘာအတွက်လုပ်တာလဲ ဆိုတာမကြည့်ခဲ့လို့ နယ်ချဲ့တွေနဲ့ တိုက်တဲ့အခါ အပြတ်အသတ် ရှုံး နိမ့်ခဲ့ရတာပါ။ ကနောင်မင်းသား ကြိုးစားခဲ့တာဟာလည်း ဘယ်သူ့ကို သတ်ဖို့ ဘယ်သူ့ကို သေစေဖို့ ဆိုတာမဟုတ်ဘဲ သူများတွေ တိုးတက်တာကို အမှီလိုက်တဲ့ သဘောပါ။
နည်းနည်းဆိုပြီး တော်တော်ရှေသွားပြီ ဖြစ်လို့ ရှေ့ဆက် တတ်နိုင်သလောက် တိုတိုပဲ ပြောပါတော့မယ်။ ဒီလိုပဲ ဟက်တဲ့သဘောမှာ ဘယ်သူ့ကို ဒုတ်ခ ရောက်ပါစေလို့မဟုတ်ပဲ ဒီလိုလည်း ဟက်လို့ရတယ်ဆိုတာ သိစေချင်တဲ့သဘောနဲ့ဆိုရင် ဘယ်သူတွေ ဘာပြောပြော ဂရူမစိုက်ပါနဲ့။ ဘာအတွက်လုပ်တာလဲ ဆိုတာပဲ ကြည့်ပေးပါ။ ဒီလိုပြောလို့ ကိုယ်ပြောလိုက်တဲ့ နည်းနဲ့ ဒုစရိုက်မှုတွေကော ဖြစ်မလာနိုင် ဘူးလား လို့မေးလို့ရပါတယ်။ ဒီအတွက် အဖြေကတော့ အပေါ်မှာ ပြောပြီးသလိုပါပဲ။ ဘယ်ဟာမှ အလကားမရဘူး။ တစ်ခုခုကိုတော့ ရင်းရမှာပဲ လို့ပဲ ဖြေရမှာပါ။ ဒီအဖြေကို လက်မခံနိုင်သေးဘူးဆိုရင် ဥပမာတစ်ခုကို ဦးတည်ပြီး ပြောပြပါမယ်။အက်မင် ပတ်စ်ဝေါ့ကို ဟက်တယ်ဆိုပါစို့။ ဒီဟက်လို့ရတဲ့အကြောင်းကို ပြန်ပြောပြလို့သာ ကျွန်တော်တို့ သိရတာပါ။ ဒီလိုသိသွားတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒေတာ တွေကို ဒါထက် ပိုလုံခြုံအောင် ထားလို့ရတာပေါ့။ ဒီလိုမဟုတ်ပဲ ဒါကြီးကို တစ်ကယ်လုံံခြုံတယ်ထင်ပြီးတော့ ထားလိုက်ရင်တော့ တစ်ကယ် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်လာရရင် အပြတ်အသတ် ကို ကျရှုံးသွားမှာပါ။ ဒါဆိုရင် အားလုံးအဆင်ပြေသွားအောင် ဟက်လို့ရတယ်လို့ပဲ သတိပေးလိုက်ပေါ့ ၊ အသေးစိတ် မပြောနဲ့ပေါ့ လို့ဆိုလာရင်တော့ ဒါဟာ စာထဲမှာသာ ဖတ်လို့ကောင်းပြီး လက်တွေ့မှာတော့ အဆင်မပြေဘူးလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အရင်ကတည်းက ကျွန်တော် အက်မင်ပတ်စ်ဝေါ့ ကို ဟက်လို့ရတယ်ဆိုတာ သိထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလောက် လွယ်မယ်လို့ မထင်ခဲ့ဘူး။ တစ်ကယ့် ဟက်ကာကြီးတွေသာ လုပ်နိုင်တယ် လို့ထင်ထားတာ အခုတော့ ဘီဂင်နာ သာသာလေးတောင် လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအက်မင်ပတ်စ်ဝေါ့ဟာ မလုံခြုံဘူးဆိုတာထက် လုံးဝ မလုံခြုံဘူးလို့ သိလိုက်ရပါတယ်။
ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကိုျးကျေးဇူး တွေထဲက တစ်ခုလောက်ကိုလဲ ပြောပြပါရစေ။ ဒီလို ဟက်လိုက်တော့ ဒီပစ်စီး ကိုထုတ်တဲ့ ကုန်ပဏီ ကလည်း ငါ့ဟာကတော့ ဒီနေရာမှာ ဟာနေပါလားဆိုတာ သိလိုက်ရတော့ ဒီ့ထက် ပိုကောင်းအောင် ထုတ်လုပ် လာကြမှာပေါ့။ ငါကတော့ အဖြူရောင် ဟက်ကာပဲ ဒါကြောင့် သူများကို မဟက်သင့်ပါဘူး လို့မစဉ်းစားဘဲ အပြုသဘောဆောင််တဲ့ ဟက်ခြင်းမိုျးဆိုရင် ဖြူတယ်ပဲပြောပြော မည်းတယ်ပဲပြောပြော လုပ်သင့်ပါကြောင်း ဘယ်သူ့ကိုမှ မရည်ရွယ်ဘဲ ဘယ်သူ့ကိုမှ မစောင်းမြောင်းဘဲ ကျွန်တော့် တစ်ဦးတည်း အမြင်ကို ဆွေးနွေးရင်း နိဂုံးခုျပ်အပ်ပါသည် ခင်ဗျာ။
ကျွန်တော့်အပေါ် ညီအစ်ကိုတို့ရဲ့ အမြင်များ သဘောထားများ မကျေနပ်ချက်များ မတူညီမှုများကို ညီရင်းအစ်ကို လို သဘောထားပြီး အားမနာတမ်း ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆဲဆိုဆုံးမ ဆွေးနွေးနိုင်ပါကြောင်း ပြောကြားရင်း ထပ်ဆင့် နိဂုံးခုျပ်အပ်ပါသည် ခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ််။
Passware Kit Enterprise Edition v8.0 Build 2596
Excel, Word, Window 2003/XP/2k/NT အစရှိတဲ့ဟာတွေတင်မကပါဘူး.. Lotus Notes, RAR, WinZip, Access, Outlook, Acrobat, Quicken, QuickBooks, WordPerfect, VBA. အစရှိတဲ့ MS Office ရဲ့ Version အကုန်လုံးလိုလိုကို Password Recovery လုပ်နိုင်ပါတယ်.. စမ်းကြည့်ပါ..
အောက်မှာပါပါတယ်. .. သူ Recovery လုပ်နိုင်တဲ့ အမျိုးအစားတွေ
and Zip Key
it's can work server 2003?if it can't work plz send reset password s/w. (bcoz my server(i train my self) attack by flashy it's restart my password i can't access my server. :6:
ကျေးဇူးဗျာ ဒါကို လိုက်ရှာနေတာ။
i can't download. send my another link plz
အကို ဒီမှာ ကို exiter တင်ပေးထားတာ ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ ဒေါင်းလိုက်နော်။
thz u bro . i can download from that link thz u so much:67:
Windows တွေကုန်သလောက်ပါဘဲ Recovery ရတယ်
တစ်ချက်လောက်မေးပါရစေ အရင်ကျွန်တော်သုံးဖူးတဲ့ Boot CD က dos ကနေပြီး boot တက်ပြီး password ကိုဖျက်တာ ဒီမှာ ကော ဒီလိုသုံးလိုရလား နောက်ပြီး အရင် CD မှာတုန်းက တစ်ခြား function တွေပါတယ် ဒီမှာ ကော ပါသလား:D:D:D:D
ကျွန်တော် Admin password ကို current password မသုံးဘဲပြင်နိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။
1.run box ကိုဖွင့်ပါ..
4.admin ကိုဖြစ်စေ၊user ကိုဖြစ်စေ၊ password ပြင်နိုင်ကြပါတယ်။:103::103::103::68::68::68:
နောက်တစ်ခုကBIOS ကိုpassword မပေးထားဘူးဆိုရင်ပေါ့လေ...
ERD commander ကိုသိကြမှာပါ(အခု2009ထိ)ကိုသုံးပြီး windows password ကို
ဒီလို Windows မှာ account အမျိုးအစားသုံးခုရှိတယ်
- Guests ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ဧည့်သည်တွေကို သုံးခိုင်းတာနဲ့အတူတူပဲ ဘာမှ installation လုပ်မရ.. Uninstall လုပ်မရပေါ့ဗျာ
- Limited ကလည်းတူတူပါပဲ install လုပ်မရ ဘာမရပေါ့.. guests ထက်တော့ နည်းနည်းသာတာပေါ့.. သူက ကိုယ့်ကိုယ်ကို password ပေးထားလို့ရသေးတယ်..
- administrator သူကလည်း ထုံးစံအတိုင်းပါပဲ admin ဆိုတော့ account တွေအကုန်လုံးကို ထိန်းချုပ်လို့ရတာပေါ့ install လုပ်ထားလို့ရတယ်.. အကုန်လုံး လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်..
ကျန်ပါသေး တယ််.... System Account လေ.....
Window တိုင်းမှာတော့ပါချင်မှပါလိမ့်မယ်.....(Window ကို Crack တဲ့လူပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်)
System Account ပါရင်တော့ ထို Account နဲ့ သုံးချင်ရင် အောက်ပါ link မှာလေ့လာကြည်ပါ....
System Account ပါရင်တော့ ထို Account နဲ့ သုံးချင်ရင် ဒီမှာလေ့လာကြည်ပါ....
ကိုlukwasarခင်ဗျား.....ကျွန်တော်တစ်ခုပြောချင်လို့ပါခင်ဗျာ...အစ်ကိုနောက်တစ်ခါလင့်ပေးရင်hyper link ဖြုတ်ပြီးcoding နဲ့ဘဲ
post ကို ပြန်ပြင်လိုက် ပါပြီဗျာ.....
ဒါကလည်း post ရေးတဲ့ Application မှာကိုက Insert Link button လေးပါနေ လို့ လုပ်လိုက်တာပါ...
သူ့ function ကိုက ပေးထားတော့ လုပ်လိုက်တာပါ..
တခြား ရည်ရွယ်ချက် ဘာမှ မရှိပါဘူး...
...လူ့ဘ၀မှာ ရိုးသားမှူက လည်း တစိပ်တပိုင်းပါပဲ...
အာ အဲဒါကြီးတော့ ဒေါင်းလုပ်မလုပ်ပါရစေနဲ့ဗျာ ... 70 MB လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ ပျင်းအောင်နေမှ
ရမယ်ထင်တယ် ... ဟီး .. ဒါကြောင့် အဲဒီ Safe Mode ကနေ၀င်ရင် တွေ့ရမယ့် Admin ကို Password
ဘယ်လိုပေးရမယ်ဆိုတာကို ပြောပြပေးပါဗျာ .. ဒီလောက်ဆိုရင်ရပါပြီ .. ဒါပြီး Guest အတွက် ကော်ပေါ့နော်... ကျွှန်တော်လဲ ရှာကြည့်မယ် ..
.....ကျွန်တော်ကအဲဒီပြသနာကို Thread အသစ်နဲ့တင်ပြီးမေးတော့မလို့ တော်သေးတယ် မေးစ၇ာမလိုတော့ဘူးပေါ့......